Igwe Mgbube Igwe, Mpepu Mpepu Nkume - Huashili
2716 Igwe Mgbucha Nkume
Injinia enyemaka dịpụrụ adịpụ
Nlekọta ndị ahịa ， dozie isi ihe mgbu ndị ahịa.
Mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ
Ntụkwasị obi, nkwanye ùgwù, azụmahịa ọnụ, ọdịmma ndị mmadụ.
Ọdịmma ngwaahịa bụ isi nkuku nke uto anyị.
Huashili technology bụ a set nke n'ibu akụrụngwa akpaaka nnyocha na mmepe, n'ichepụta, ahịa na otu nke elu-tech n'ichepụta ụlọ ọrụ. The ụlọ ọrụ nwere a akụ na ụba nke n'ibu akpaaka ngwá mmepụta mmepụta, ikike ike, na nkà na ụzụ larịị na mbara akụ na ụba ike na otu ụlọ ọrụ na-ebute ụzọ nke anụ ụlọ ụlọ ọrụ, ọgụgụ isi akpaaka ngwá nnyocha na mmepe, ihe onwunwe akara, akụrụngwa arụmọrụ na ịme ngosi uwe anọwo na anụ ụlọ na-eduga n'ọkwa, ọtụtụ usoro. emejuola oghere ụlọ
Ahịa Gaa Akụkọ
Ebee ka azụmahịa anyị dị: Ruo ugbu a, anyị eguzobewo usoro ndị nnọchite anya proy na Algeria, Egypt, Iran, South Africa, India, Malaysia na Mba Ndịda Ọwụwa Anyanwụ ndị ọzọ. Ọzọkwa na Middle East na South America. Anyị nwere onye mmekọ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa.
1. Nhọrọ: dịka oke nha nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya, họta nke dabara adaba maka nke gị, ihe ngosi igwe 2626: 50 * 50 ~ 2440 * 2000mm, ụdị 3826: 50 * 50 ~ 3660 * 2440mm, model3829: 50 * 50 ~ 3660 * 2800mm, Model4228: 50 * 50 ~ 4200 * 2800mm Iji tụlee ndabere nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ...
Kedu otu esi ahọrọ igwe eji egwu 45 digri?
Site n'inwe ewu ewu nke okwute ahụ, ihe eji eme ka ihe eji eme ka ọ rụọ ọrụ, jiri nwayọọ nwayọọ banye n'ahịa ahụ, iji gwa gị ezigbo ngwa ahịa sintered nkume, ihe nrịgo 45 ma e jiri ya tụnyere mma ncha ihu ...
Na Guangzhou Design Week na Nkume Nkume nke afọ a, anyị tụtụrụ na ihe na-enweta ọtụtụ traction. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anụ ụtọ nkume sintered.
Kedu ihe bụ sintered nkume? Ọ bụ ihe mebere ọnụ kọfị mmadụ mere maka inogide. Ọ dịla afọ ole na ole ugbu a, yabụ ọ bụrụ na ị kpaghị ya na mbụ, ị nwere ike oge adịghị anya. Kedu ụzọ ọ bụla, ị ga-achọ ịmụta etu esi egbusi nkume sintered n'ụzọ ziri ezi ...